Modernized Oriental Technique of Accurate Astrology (MOTAA): စစ် ဧကရာဇ် နပိုလီယံနှင့် ဗေဒင်ပညာ (အပိုင်း ၄)
ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့် အတူ- စစ်မြေပြင်သို့ ကိုယ်ဝန်ကြီးနှင့် လိုက်ပါသွားခဲ့သော နပိုလီယန်၏ မိခင်သည် စစ်မြေပြင်မှ- ကိုယ်လေး လက်ဝန်ကြီးနှင့် အပြေးအလွှား ပြန်ပြေးလာယင်း- အိပ်ခန်း ထဲသို့ပင် မရောက်သေးပဲ- အိမ်ရှေ.ကြမ်းပြင် ပေါ်တွင်ပင် ခယ်မ ဖြစ်သူ၏ အကူအညီ ဖြင့် နပိုလီယန် အား မွေးဖွား လိုက်ရသည်ဟု ဆိုထားပါသည်။ ထိုနေ့သည်ကား- ၁၇၆၉-ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၅-ရက် ဖြစ်၍ မွေးဖွားရာ ဒေသမှာ ပြင်သစ်ပြည်ပိုင်၊ အက်ဂျာ စီယို မြို. ဖြစ်သည်။ အင်္ဂါသား ဖြစ်၏။
အနောက်တိုင်း ပညာရှင် အများစု မှီငြမ်းတွက်ချက်ကြသည့် Astro data bank က ပေးသော မွေးချိန်မှာ နံနက် ၁၁း၃၀ ဖြစ်၍၊ MOTAA နည်းစနစ် အရ- ပြန်လည် စစ်ဆေးသော အခါတွင် နံနက် ၁၁း၃၄ ဖြင့် မှသာ ၄င်း၏ ဖြစ်ရပ်များနှင့် ပြန်လည် ကိုက်ညီ သဖြင့် ယခု ဇာတာကို နံနက် ၁၁း၃၄ ဖြင့် သာ စစ်ဆေးထားပါသည်။
ဇာတာရှင်သည် တူလဂ် ၁၆း၃၀ ဖြစ်၍၊ မကာရစန်း ၈း၁၉ ဖြစ်သည်။ (အနောက်တိုင်းနည်း သာယန မူ ဖြင့် တွက်သူများက- ဗြိစ္ဆာလဂ်ဟု ဆိုကြသည်။ ၄င်းသည် နိယာယန နှင့် သာယန မူတို့၏ ကွာခြားချက် ဖြစ်သော အာယန အံသာကြောင့် ဖြစ်သည်။)
အလွန်ထူးခြားသော သူများတွင် အလွန်ထူးခြားသော ကောင်းကင် ဂြိုဟ်တို့ ရပ်တည်မှု အနေအထားများ ရှိနေစမြဲပင် ဖြစ်ပါသည်။ နပိုလီယန် ၏ ဇာတာအား မသုံးသပ်ခင်- အခြားသော ထူးခြားသော ဂြိုဟ်အနေအထား တစ်ခုကို တင်ပြ လိုပါသည်။
အောက်တွင် ဖေါ်ပြထားသော ကောင်းကင်မြေပုံမှာ ဘီစီ ၅၇၅ -ခုနှစ်တွင် တည်ရှိခဲ့သော ယူရေးနပ်စ်၊ နက်ပ်ကျွန်း၊ ပလူတို တို့- ၃-ခု ဆိုင်သော အနေအထားပင် ဖြစ်သည်။ အင်မတန် နှေးကွေးစွာ သွားတတ်သော ထိုဂြိုဟ်ကြီး တစ်လုံးနှင့် တစ်လုံး ဤသို့ မဟာတြိဂံ ပုံစံ အနေအထား ဖြစ်သော ကာလသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာမှ ဆုံလာတတ်သော ကာလဖြစ်သည်။
ယူရေးနပ်စ် ဂြိုဟ်သည် နေအား တစ်ပါတ် ပါတ်မိရန် အတွက် ၈၄-နှစ် ကြာသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ရာသီ တစ်ခု တွင် အကြမ်းပျင်း ကာလ ၇-နှစ်ကြာသည်။ နက်ပ်ကျွမ်းသည် နေအား တစ်ပါတ် ပတ်မိရန် ၁၆၅-နှစ် ကြာသည်။ တစ်ရာသီတွင် ၁၄-နှစ် နီးပါးနေသည်။ ပလူတိုသည် တစ်ပါတ် အတွက် ၂၄၈ နှစ်ကြာသဖြင့် တစ်ရာသီတွင် ပျမ်းမျှ ၂၁-နှစ်ခန့် နေသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ ထိုကာလ ဘီစီ ၅၇၅-၏ အနီးနား ဆယ်စုနှစ် ကာလများ အတွင်းတွင် ထိုဂြိုဟ်ကြီး ၃-ခု၏ တည်နေရာ အနေအထားမှာ ဖိုခနောက်ဆိုင်- အတိအကျနီးပါးပင် ဖြစ်နေခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုကာလ ပါတ်ဝန်းကျင် တွင် မွေးဖွားပေါ်ပေါက်ခဲ့သူများကို ကြည့်လိုက်မည် ဆိုလျှင်-
အတွေးအခေါ် ပညာရှင် ကြီး ကွန်ဖြူးရှပ်စ်ကို ဘီစီ ၅၅၁-တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ တောက်တယ်ကျင်း ကို ရေးသားခဲ့သော တရုပ် တာအို ၀ါဒကို စတင် ခဲ့သူ ပညာရှိကြီး လောင်ဆူး သည် ဘီစီ ၅၇၀ တွင် မွေးဖွားခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ သင်္ချာပညာရှင် ကြီး ပိုက်သာဂိုရပ်စ် (Pythagorus) သည် ဘီစီ ၅၈၀ တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။
မြတ်စွာ ဘုရားရှင်သည် ဘီစီ ၅၆၃ (သမိုင်းပညာရှင်များ အဆိုအရ)၊ အချို့က ဘီစီ ၅၈၇- စက်တင်ဘာလ ၁၅-ရက် (အချို.ပညာရှင်များ အဆိုအရ)၊ မဟာ ဗုဒ္ဓ၀င်အရ ဆိုလျှင် မဟာသက္ကရာဇ် ၆၈-ခုနှစ် တွင် မွေးဖွားခဲ့သည် ဟု ဆိုထားပါသည်။
ထို ပညာရှင်ကြီးများ မွေးဖွားပေါ်ပေါက်ချိန်နှင့် အထက်ပါ ဂြိုဟ်ကြီး ၃-လုံး ဖိုခနောက်ဆိုင် ဖြစ်နေသော ကာလ သည် တိုက်ဆိုင်မှု သက်သက်သာ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသလား။
သာမာန် လူတော်များသည် မိမိသက်တမ်းကာလ အတိုင်းအတာ - အများဆုံး အားဖြင့် ရာစုနှစ် ကာလမျှသာ အမည်ထင်ရှား တတ်ကြသော်လည်း- အထက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများသည် မည်မျှ ကာလ ကြာအောင် ထင်ရှားခဲ့ကြပါသနည်း။ မည်သို့ ပုံစံဖြင့် ထင်ရှားခဲ့ ကြပါသနည်း။ လွန်စွာကျယ်ပြန့်သော အနေအထား ရှိသဖြင့် ဤနေရာတွင် ဆွေနွေးခြင်း မပြုတော့ပဲ- စာဖတ်သူတို့ ကို အသိပေးရုံမျှသာ တင်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် အရှေ.တိုင်း ဝေဒပညာရှင် များသည်- ကမ္ဘာနှင့် လွန်စွာ အလှမ်းကွာဝေးသော- သာမာန် မျက်စိဖြင့် မမြင်နိုင်သော ထို ဂြိုဟ်ကြီး ၃-လုံး အား လူတစ်ယောက်၏ ဇာတာကို စစ်ဆေးရာတွင် ထည့်တွက် ကြခြင်း မရှိပါ။ သို့သော် ထိုဂြိုဟ်ကြီးများ၏ ဆက်စပ်လွှမ်းမိုးမှုသည်- ကမ္ဘာနှင့် ယှဉ်သော ဖြစ်ရပ်များတွင်မူ လွှမ်းမိုးမှု ရှိနေသဖြင့် Mundane Astrology တွင် ထည့်သွင်း စဉ်းစားရန် လိုပါသည်။
နပိုလီယန် ၏ ဇာတာ။
ယူရေးနပ်စ်၊ နက်ပ်ကျွန်း၊ ပလူတို တို့- ကိုပါ ထည့်သွင်း၍- နပိုလီယန်၏ ဇာတာကို ဖွဲ့လိုက်မည် ဆိုပါက အောက်တွင် မြင်ရသည့် အတိုင်းပင် ဖြစ်သည်။ အနေအထား ပုံစံ မျိုးစုံဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။ ညာဘက် အောက်တွင် ရေးဆွဲထားသော ပုံသည် AutoCAD ဖြင့် ဒီဂရီ အတိအကျ ဖြင့် ရေးဆွဲထားသော ပုံဖြစ်ပါသည်။
အောက်တွင် ဆက်လက်၍ မိုးတား MOTAA သမားရိုးကျ တြိစက္က ဇာတာပုံစံကို ဖေါ်ပြထားပါသည်။ ဤဇာတာ စက် ၃-ခုတွင်မူ ထိုဂြိုဟ်ကြီး ၃-လုံးအား မဖေါ်ပြတော့ပါ။
နပိုလီယန်၏ ဇာတာကို ရှေးကျမ်းအလာ ယုဂ်များဖြင့် စစ်ဆေးခြင်း။
ယုဂ် - (တနည်းအားဖြင့် ယောဂ) ဟု ခေါ်သော ဤ အသုံးအနှုန်းသည် Planetary combination ကို ဆိုလိုပါသည်။ မည်သည့် ဂြိုဟ်နှင့် မည်သည့်ဂြိုဟ် ပူးလျှင် (သို့မဟုတ်) မြင်လျှင်၊ ဆက်သွယ်မှု ရှိလျှင် မည်သို့ ဖြစ်မည် ဟူသော ပုံသေ ဟောချက်များ ဖြစ်ပါသည်။
ဤနေရာတွင် တစ်ချက် ထင်ရှားစေရန်မှာ- ဇာတာရှင်တွင် ကောင်းသော ယုဂ်များ ရှိသော်လည်း- ထိုယုဂ်များတွင် ပါဝင် နေသော သက်ဆိုင်ရာ ဂြိုဟ်တို့ အနေဖြင့် တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်သော အခြေအနေများနှင့် ထိုဂြိုဟ်တို့၏ အင်အား အပေါ်တွင် မူတည်၍သာ- အထက်ပါ ယုဂ် ဟောချက်များသည် မှန်ကန် မည် ဖြစ်ပါသည်။ ရှင်းလင်း အောင် ထပ်ပြောပါမည်- ယုဂ်ဟောချက်များအရ- ဇာတာရှင်တွင် မင်းဖြစ်စေတတ်သော ယုဂ်၊ တစ်နည်းအားဖြင့် ရာဇယုဂ် ၄-ခု၊ ၅-ခု ရ နေသည် ဖြစ်ပါစေ- ထိုယုဂ်များ တွင် ပါဝင်သော ဂြိုဟ်များ အနေဖြင့် အင်အားမကောင်းပါက- ထိုဇာတာရှင်သည် ကြီးမားသော တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရသည့် အုပ်ချုပ်သူ အနေအထားသို့ မရောက်လာနိုင်ပါ။ ရာဇယုဂ် ၁-ယုဂ် ထဲပင် ဖြစ်ပါစေ- ထိုယုဂ်တွင် ပါဝင်သော ဂြိုဟ်များ အနေဖြင့် အင်အား အလွန် ကောင်းနေပါက- ထိုဇာတာရှင်သည် ကြီးကျယ် ထင်ရှားသူ ဖြစ်ပါမည်။
မိုးတား MOTAA နည်းစနစ်ဖြင့် မစစ်ဆေးခင်- ရှေးကျမ်းအလာ ယုဂ်အဟောများဖြင့် စစ်ဆေးပြပါမည်။ သို့သော် ယုဂ်များကို တွေ့တိုင်း မှန်ကန်သည်ဟု မယူဆပဲ- သက်ဆိုင်ရာ ဂြိုဟ်တို့၏ အင်အား အလိုက်၊ လွှမ်မိုးမှု အနေအထားတို့ ဖြင့် စိစစ်သုံးသပ် ဖေါ်ပြပေးထားပါသည်။
လဂ်သည် စရ ဘာဝ ရာသီတွင် တည်လျှက်- အခြားဂြိုဟ် အများတို့သည် လည်း စရ ဘာဝ ရာသီတွင် တည်နေကြလျှင်- ရာဂျူး ယောဂ ကိုရရှိသည်။
(ဂြိုဟ် ၉-လုံးအနက် - စနေ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ ကြာသပတေး၊ တနင်္လာ ၄ လုံးသည် စရ ရာသီတွင် တည်နေကြသဖြင့် ဤယောဂကို ရခြင်း ဖြစ်သည်။)
ဇာတာရှင် အနေဖြင့် ရည်ရွယ်ချက် ကြီးမားပြီး၊ အမည်ကျော်ကြားရန်၊ အောင်မြင် ရန်တို့ အတွက် တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ လှည့်လည်သွားလာမည်။ ခရီးသွားရခြင်းကို နှစ်သက်သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက် မြန်၍ အခြေအနေလိုက် သင့်တော်အောင် ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိသည်။ အတွေးအခေါ် အသိဥာဏ်သည် "အရှင်" ဖြစ်နေလျှက် တံခါးဖွင့်ဝါဒ ရှိသည်။ သို့သော် အမြဲတမ်း ပြောင်းလဲတတ်သော စရိုက်၊ အပြောင်းအလဲမြန်သော စိတ်ဓါတ်၊ အမြဲ ယုံကြည်ထား၍ မရသော အနေအထားနှင့် တစ်စုံတစ်ခုကို စွဲမြဲစွာ ကိုင်တွင် မထားတတ်မှုတို့ကြောင့် အစဉ်အမြဲ လိုလို ရုန်းကန် လှုပ်ရှားနေရခြင်း နှင့် ခိုင်မြဲသော ဥစ္စာ၊ စည်းစိမ်၊ ပိုင်ဆိုင် တို့ကို ရေရှည် မရထားနိုင်ပါ။
ကြာသပတေးသည် တနင်္လာမှ ကိန်းအိမ် (၁၊၄၊၇၊၁၀ တန်.တွင်) ရပ်ခြင်းဖြင့်ဤ ယောဂ ကိုရရှိသည်။
(ယခု ဇာတာတွင် ကြာသပတေးသည် တနင်္လာမှ ၁၀-တန်.အကွာတွင် တည်သဖြင့် ဤယောဂ ကိုရရှိခြင်း ဖြစ်သည်။ နပိုလီယန် ၏ မူလဇာတာတွင် ကြာသပတေး သည် အင်အားကောင်းသောကြောင့် ဤယုဂ်သည် ထင်ရှားစွာ အကျိုးပြုရခြင်း ဖြစ်သည်။)
ဂဇ ဆိုသည်မှာ ဆင်ကို ဆိုလို၍ ကေသရီသည် ခြင်္သေ့ကို ဆိုလိုသည်။ ဆင်နှင့် ခြင်္သေ့တို့သည် တောတောင် အလယ်တွင် လွန်စွာထင်ရှား၍ အခြားသော တိရစ္ဆာန်များ၏ ကြောက်ရွံ.လေးစားခြင်းကို ရရှိသကဲ့သို. ၄င်းတို့သည် လူအများကို သင်ကြားပေးနိုင်ခြင်း၊ အကြံပေးတတ်ခြင်း၊ သြဇာ အာဏာကြီးမားခြင်း တို့တွင် ထင်ရှားသည်။ သေဆုံး ပြီးနောက် အချိန်ကြာမြင့်သော ကာလ အထိ ၄င်းတို့၏ အမည်မှာ ကြာရှည်စွာတည်တံ့သည်။ မှတ်ချက်၊ ဂဇကေသရီ ယုဂ်ကို တွေ.ရှိပါက ၄င်းကို ဖျက်ဆီးတတ်သော ကမ္မဓရုမယုဂ် (Kemadruma Yoga) ၊ (တနင်္လာ၏ ဘေးဘယ်ညာ နှစ်ဘက်စလုံး တွင် တနင်္ဂနွေမှ လွဲ၍ မည်သည့်ဂြိုဟ်မှ မရှိသောယုဂ်) ပါမပါ ကြည့်ရန်လိုပါသည်။
အကယ်၍ ကမ္မဓရုမ ယုဂ် ကို တွေ.ခဲ့ပါလျှင် လည်း ၄င်း၏ အဆိုးကို ပျက်ပြယ်၍ ကောင်းခြင်းကို ပြန်လည် ဖြစ်စေ တတ်သော ကာလပဓရုမယုဂ်၊ (Kalpadruma Yoga) (လဂ်မှ ကိန်းအိမ်တို့တွင် ဂြိုဟ်ရပ်တည်ခြင်း ယောဂ) ပါမပါ ကြည့်ရန်လိုပါသည်။
ကြာသပတေးသည် တနင်္လာမှ ၁၀-တန်.တွင် ရပ်တည် နေပါက ဤယောဂကို ရသည်။
(ယခု ဇာတာတွင် ကြာသပတေးသည် တနင်္လာမှ ၁၀-တန်.အကွာတွင် တည်သဖြင့် ဤယောဂ ကိုရရှိခြင်း ဖြစ်သည်။)
ဤအမျိုးအစား ဂဇ ကေသရီယောဂ ကိုရသူသည် အောင်မြင်သော ဘ၀တက်လမ်း ရှိမည်။ ထင်ရှားသော ရာထူးဂုဏ်ဒြဗ် နှင့် ကြွယ်ဝခြင်း ရှိမည်။ ရည်ရွယ်ချက် ကြီးမားသည်။ ဘာသာရေး ကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်စေ ဇနီးသားသမီး များကို စွန့်လွှတ်ပြီး သီးသန့် နေရတတ်သည်။
တနင်္လာ သည် တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်မှ အပ္ပေါကလိမ အိမ် (၃၊၆၊၉၊၁၂ တန်.တို့တွင်) ရပ်ခြင်းဖြင့်ဤ ယောဂ ကိုရရှိသည်။
(တနင်္လာသည် တနင်္ဂနွေမှ ၆-တန့်တွင် တည်သောကြောင့် ဤယောဂကို ရသည်။ နပိုလီယန်၏ ဇာတာတွင် တနင်္လာဂြိုဟ်သည် အင်အားနည်းသဖြင့် ဤယုဂ်သည် သိပ်အကျိုးမပြုသော ယုဂ်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။)
ဤယောဂ ကို ရရှိခြင်းဖြင့် အောင်မြင်ခြင်း၊ ကြွယ်ဝခြင်း၊ လေ့လာ သင်ကြားမှုတွင် ထိရောက်အောင်မြင်ခြင်း၊ နာမည်ကြီးခြင်း တို့ကို ဖြစ်စေသည်။
တနင်္လာမှ လွဲ၍ အခြားဂြိုဟ်တစ်လုံးလုံးသည် တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်မှ ၁၂ တန်. တွင် ရပ်ခြင်းဖြင့်ဤ ယောဂ ကိုရရှိသည်။
(ဤဇာတာတွင် စနေ နှင့် ဗုဒ္ဓဟူး တို့သည် တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်မှ ၁၂ တန်. တွင် ရပ်ခြင်းဖြင့်ဤ ယောဂ ကိုရရှိထားသည်။)
ဤယောဂတွင် သောမဂြိုဟ် အနေအထား ကို ရရှိခြင်းဖြင့် ဇာတာရှင်သည် စကားပြောဆိုရာတွင် ကန်.သတ်မှု မရှိခြင်း၊ လွှမ်းမိုးနိုင်သော စွမ်းရည် ရှိခြင်း၊ သင်ကြား လေ့လာရာတွင် ထက်မြက်ခြင်း၊ အောင်မြင် ကျော်ကြားခြင်း၊ ကိုယ်ကာယ စွမ်းအင် ပြည့်စုံခြင်း၊ ကိုယ်ကာယ စွမ်းရည်ကို အစွမ်းကုန်သုံးတတ်ခြင်း တို့ကို ဖြစ်စေသည်။ လမ်းလျှောက်လျှင် အောက်ကို ငေးလျှောက်တတ်သည် ဟု ဆိုထားသည်။
ဗောသျှိ ယောဂ (ဂြိုဟ်ဆိုး)
တနင်္လာမှ လွဲ၍ အခြား ပါပဂြိုဟ်တစ်လုံးလုံးသည် တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်မှ ၁၂ တန်. တွင် ရပ်ခြင်းဖြင့်ဤ ယောဂ ကိုရရှိသည်။
(သမားရိုးကျ ဇာတာ ဆန်းစစ်ခြင်းများတွင် စနေ အား ဂြိုဟ်ဆိုး အဖြစ်ဖြင့် ယူဆကြသော်လည်း- ဗုဒ္ဓဟူးသည် ၁၂-တန့် သခင် ဖြစ်နေခြင်းဖြင့် - ဂြိုဟ်ဆိုးရပ်သော သဘောကို မိုးတားမှ ယူဆသည်။ ဤယုဂ် ဟောချက်သည် မမှန်ကန်ပါ။)
ဤယောဂ ကို ရခြင်းဖြင့်- ဇာတာရှင်သည် ရက်စက် တတ်သော သဘာဝ ရှိသည်။ အကျည်းတန် သော ရုပ်ရှိ၍၊ တဏှာရာဂ ကျူးကာ၊ ဥာဏ်နည်း တတ်သည်။
ဗုဒ္ဓဟူး သည် တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်မှ ၁၂ တန်. တွင် ရပ်ခြင်းဖြင့်ဤ ယောဂ ကိုရရှိသည်။
(သမားရိုးကျ နည်းဖြင့် ဗုဒ္ဓဟူးအား ဂြိုဟ်ကောင်း အဖြစ်ယူဆပြီး- မကောင်းသော ဘာဝဖြစ်သော ၁၂-တန့်တွင် ရပ်တည်ခြင်းဖြင့် ဤဟောချက်ကို ကျမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်သာ ဖြစ်သဖြင့် ဤယုဂ် ဟောချက်သည် မမှန်ကန်ပါ။)
ဤယောဂ ကို ရခြင်းဖြင့်- ဇာတာရှင်သည် ဆင်းရဲ သော အသွင်ဖြင့် သာ နေရတတ်၍၊ ကျန်းမာ ရေးချို.တဲ့ကာ- အရှက်နည်း တတ်သည်။
ဝေါသျှိ ယောဂ (သျှာနီ)
စနေ သည် တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်မှ ၁၂ တန့် တွင် ရပ်ခြင်းဖြင့်ဤ ယောဂ ကိုရရှိသည်။
ဝေါသျှိယောဂ ဤအမျိုးအစားကို ရခြင်းဖြင့် ဇာတာရှင်သည် အခြားသူတို့၏ ဇနီးတို့ အပေါ်တွင် စိတ်ဝင်စားတတ်ခြင်း၊ ကြင်နာတတ်သော သဘောရှိခြင်း၊ ပင်ပန်းသော ရင့်ကျက်သော အသွင်သဏ္ဍာန် ရှိခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေသည်ဟု ဆိုသည်။
တနင်္လာ မှ ၁၀-တန့်တွင် သဘာဝ သောမဂြိုဟ်တစ်လုံးလုံးရပ်တည်သော် ဤယောဂကို ရသည်။ (ဖလဒီပက-၆။၁၂)
(ယခု ဇာတာတွင် ကြာသပတေးသည် တနင်္လာမှ ၁၀-တန်.အကွာတွင် တည်သဖြင့် ဤယောဂ ကိုရရှိခြင်း ဖြစ်သည်။ ကြာသပတေးသည် သဘာဝ သောမဂြိုဟ်ဖြစ်သည်သာ မက- ၃-တန့်သခင် အဖြစ် ကာရက သောမဂြိုဟ်လည်း ဖြစ်သောကြောင့် ဤယောဂသည် ကောင်းမြတ်သော အနေအထားကို ဖြစ်စေသည်။)
ဇာတာရှင် တစ်ဦး အနေဖြင့် အောင်မြင်မှု၊ အသိအမှတ်အပြု ခံရမှု၊ လူနေမှု အဆင့်အတန်းမြင့်မားမှု၊ ဘုန်းတန်ခိုး အာဏာ ကြီးမား နိုင်မှု တို့ရှိမရှိ စစ်ဆေးသော အခါတွင် နက္ခတ္တ ပညာရှင်တို့သည် ရာဇ ယောဂ ကို စစ်ဆေးကြရလေ့ ရှိပါသည်။
လေ့လာ တွေ့ရှိချက်များအရ- ရာဇယုဂ် ရနိုင်သည့် အနေအထားများ များစွာရှိနေရာ- လူတိုင်း လိုလိုပင်- ရာဇယုဂ် တစ်မျိုး မဟုတ် တစ်မျိုးရထားနိုင်ပါသည်။ သို့သော်- အထက်တွင် ဖေါ်ပြခဲ့သည့် အတိုင်း- ဇာတာရှင်တွင် ရာဇယုဂ် ၄-ခု၊ ၅-ခု ရ နေသည် ဖြစ်ပါစေ- ထိုယုဂ်များ တွင် ပါဝင်သော ဂြိုဟ်များ အနေဖြင့် အင်အားမကောင်းပါက- ထိုဇာတာရှင်သည် ဘုန်းတန်ခိုး ကြီးမားသူ အနေအထားသို့ မရောက်လာနိုင်ပါ။ ရာဇယုဂ် ၁-ယုဂ် ထဲပင် ဖြစ်ပါစေ- ထိုယုဂ်တွင် ပါဝင်သော ဂြိုဟ်များ အနေဖြင့် အင်အား အလွန် ကောင်းနေပါက- ထိုဇာတာရှင်သည် ကြီးကျယ် ထင်ရှားသူ ဖြစ်ပါမည်။ ဤသည်ကိုပင် ရှေးကျမ်းများက မင်းအဖြစ် ရသည်ဟု သတ်မှတ်ထား သဖြင့် ရာဇ ယောဂ ဟု အမည်သတ်မှတ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဤရာဇ ယောဂကို ရထားခြင်းဖြင့် ဇာတာရှင်သည် သြဇာအာဏာ ကြီးမားခြင်း၊ မင်းအစိုးရ၊ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ ကဲ့ သို. အာဏာရှိခြင်း တို့ကို ဖြစ်စေသည် ဟု ဆိုထားသည်။
၅-တန့် အိမ်ရှင် သည် ၇-တန့်အိမ်ရှင်၊ ၁၀-တန့်အိမ်ရှင်၊ တို့အနက်မှ တစ်ခုခုကို ပူးခြင်း၊ မြင်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်မှု ပြုခြင်း၊ တစ်ဖန် ၄င်းတို့ မှ လည်း ၅-တန့် အိမ်ရှင် အား အပြန်အလှန်အားဖြင့် ပူးခြင်း၊ မြင်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ခြင်း ရှိနေပါက ဤယုဂ် ကို ရရှိသည်။
(၁၀-တန်.သခင် တနင်္လာသည် ၅-တန့်သခင် စနေ နှင့် သမသတ်တွင် တည်လျှက်- တစ်လုံးနှင့် တစ်လုံး ၈၂% ဖြင့် အပြန်အလှန် မြင်ထားသည်။)
(၅-တန်.သခင် စနေ သည် ၁၀-တန့်တွင် တည်ထားသည်။)
ကိတ် သည် ကိန်း (သို.မဟုတ်) တြိဂေါဏ အိမ်တွင် တည်ကာ ကိန်း (သို.မဟုတ်) တြိဂေါဏ သခင်နှင့် ပူးနေပါက ဤယောဂကို ရသည်။ (ဗြို.ဟဇ် ပရသျှရ ဟောရ သျှတ္တရ ကျမ်း၊ ၃၆၊၁၇)
(ကိတ်သည် ၉-တန့် တြိဂေါဏ အိမ်တွင် တည်၍ အိမ်ရှင်ဖြစ်သော သောကြာနှင့် ပူးသည်။ သောကြာသည် ပြိဿတွင် ထိုရာသီ၏ အိမ်ရှင်ဖြစ်သော်လည်း- သခင် မဟုတ်သောကြောင့် ဤရာဇယောဂသည် အင်အားမကောင်းပါ။)
(တနင်္လာသည် မိန်န၀င်းကို စီးနင်းထားသဖြင့် မိန်ရာသီ၏ အိမ်ရှင် ကြာသပတေးသည် လဂ်နှင့် အတူပူးတွဲ နေသည်။)
ကြာသပတေး၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ သောကြာ (သို.မဟုတ်) တနင်္လာ တို့သည် ၉-တန့်တွင် တည်ကာ မိတ်ဂြိုဟ်များ၏ မြင်ခြင်း ကို ရရှိ ထားလျှက်- နေလောင် ခံရခြင်းလည်း မရှိပါက- ဤယောဂ ကိုရသည်။ (မူလကျမ်းရင်းကို မသိရပါ။)
(သောကြာသည် ၉-တန့်တွင် တည်၍ နေလောင်ခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခြင်း၊ ကြာသပတေးမှ အမြင် အနည်းငယ် ရထားသည်။)
အခြားသော ယုဂ် (ယောဂ) များ။
လဂ်သခင်၊ ကြာသပတေး (သို.မဟုတ်) သောကြာ တို့သည် ကိန်းအိမ်တွင် တည်သော် ဤယောဂကို ရသည်။ (သာဝတ္ထ စိန္တာမဏိ ၂၊၉၈)
(ကြာသပတေးသည် ၁-တန့်တွင် တည်ခြင်းဖြင့် ဤယောဂကို ရထားသည်။ နပိုလီယန် ဇာတာတွင် ကြာသပတေးသည် အင်အား ကောင်းသဖြင့် ဤယုဂ်သည် အကျိုးထင်ရှားရခြင်းဖြစ်သည်။)
ဤယောဂကို ရပါက- အသက်ရှည်ခြင်း၊ ချမ်းသာခြင်း နှင့် နိုင်ငံရေး လုပ်ပါက အောင်မြင်နိုင်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေသည် ဟု ဆိုထားသည်။
ကြာသပတေးသည် လဂ်တွင် တည်နေခြင်း (သို.မဟုတ်) ရေရာသီမှ နေ၍ လဂ်ကို မြင်နေခြင်း ရှိပါက ဤယောဂကို ရသည်။ (သာဝတ္ထ စိန္တာမဏိ ၂၊၈၇)
(နပိုလီယန်၏ ဇာတာတွင် ကြာသပတေးသည် ၁-တန့်တွင် တည်ခြင်းဖြင့် ဤယောဂကို ရထားသည်။)
ဇာတာရှင် တွင် တောင့်တင်းသော ကိုယ်ခန္ဓာရှိမည် ဟု ဆိုထားသည်။
လဂ်သခင်သည် ၄-တန့်၊ ၉-တန့်၊ သို.မဟုတ် ၁၁-တန့် တွင် တည်လျှင် ဤယောဂ ကိုရသည်။ (သာဝတ္ထ စိန္တာမဏိ ၄၊၁၆၂)
(လဂ်သခင် သောကြာသည် ၉-တန့်တွင် တည်သည်။)
ဇာတာရှင်သည် မော်တော်ယာဉ် များနှင့် အခြားသော ရုပ်ဝတ္ထုများကို ပိုင်ဆိုင် မည် ဟုဆိုထားသည်။
၅-တန့်သခင်သည် ကိန်း သို.မဟုတ် တြိကုန်း အိမ်တွင် ရပ်တည်လျှင် ဤယောဂကို ရသည်။
(၅-တန့်သခင် စနေသည် ကိန်းအိမ်ဖြစ်သော ၁၀-တန့်တွင် တည်သည်။)
ကမ္မ ဒရုမ ယောဂ
ကြာသပေတး၊ စနေ နှင့် တနင်္လာတို့သည် ကိန်းအိမ်တွင် တည်နေကြလျှင် (သမ္ဗူဟောရ ပရကသျှ ကျမ်း ၁၄။၁၃)
(ကြာသပတေးသည် ၁-တန့်၊ စနေ သည် ၁၀-တန့်၊ တနင်္လာ ၄-တန့်တွင် တည်နေကြသည်။)
ဇာတာရှင်သည် သူ၏မွေးရာ ဇာတိမြေကို - ကံအကြောင်းမလှမှုတို့ကြောင့် စွန့်ခွာရတတ်သည်။
အထက်ပါ ဆောင်းပါးသည် နပိုလီယန်၏ ဇာတာကို ရှေးကျမ်းလာ ယုဂ် ခေါ် ယောဂ များနှင့် ယှဉ်တွဲ၍ စစ်ဆေးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
စစ် ဧကရာဇ် နပိုလီယံ (အပိုင်း ၅) ကိုဖတ်ရန် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။
Labels: Myanmar Baydin, နပိုလီယံ၊ နက္ခတ်၊ ဗေဒင်၊ (မိုးတား)